Baazaar (2018) | MM Movie Store
Baazaar ဆိုတာ အိန်ဒိယအချေါအရ ဈေး ၊ ဈေးကှကျပေါ့….ဟုတျပါတယျဈေးဆိုတဲ့အတိုငျး ရောငျးသူရှိမယျ ဝယျသူရှိမယျဈေးအပွိုငျတငျတာ ခတြာတှေ အပွငျရောငျးသူ ဝယျသူနှဈဦးကွားက ပငျမဦးတညျရာ အရှုံးနဲ့အမွတျဆိုတာလညျး ရှိမှာပေါ့….ဒီဇာတျကားကွညျ့ပွီးတော့ တှေးစရာတှကေ ခေါငျးထဲမှာ အစပေါငျးမြားစှာ ထှကျလာတယျ…
ဘဝသရုပျဖျောလို့ပွောရမလားစီးပှားရေးလောက အကွောငျး ၊ စတော့ရှယျယာဈေးကှကျအကွောငျးလားဒါမှမဟုတျ ကွီးပှားခမျြးသာခငျြတဲ့ လူငယျလေးတဈယောကျအကွောငျးပဲလား…ကိုယျလိုခငျြသလို ယူလို့ရပမေယျ့ကြှနျတေျာ့အတှကျက ရသစုံ ပါဝငျနတေဲ့ ဟငျးလေးအိုးကွီးတဈခုလိုပါပဲ….
ဟိုးငယျစဉျကတညျးက ဘဝကို ခြို့ခြို့တဲ့တဲ့ နလောခဲ့ရတဲ့ရှာကှနျးကိုသာရီ…..မိဘရဲ့လောငျးရိပျအောကျကနေ ထိုးထှကျပွီးအလငျးရောငျရှိမယျထငျတဲ့ မှနျဘိုငျးမှာ အခွခေပြွီးဘဝကို တကျလမျးရှာခငျြနသေူ လူငယျလေး ရီဇျဝမျအာမကျ….မွို့ပွရဲ့လူနမှေုစရိုကျတှကွေားမှာသိက်ခာနဲ့ငှကေို အလဲအထပျလုပျနမေိတဲ့ မိနျးကလေး ပရီယာရိုငျး…
ဒီဇာတျကောငျ သုံးခုက ဒီဇာတျလမျးရဲ့ပငျစညျဆိုရငျပွိုငျဘကျကုမဏီအုပျစုတှေ ၊ သူတို့မိသားစုတှအေကွောငျးနဲ့စတော့ရှယျယာဈေးကှကျအကွောငျးတှကေ ဒီဇာတျလမျးရဲ့အကိုငျးအခကျတှလေို့ပွောရမှာပါ….ကြှနျတျောဒီလောကျပဲ ညှနျးပါရစေ….
၂၀၁၈ ခုနှဈထှကျ ဘောလိဝုဒျကားတှထေဲမှာဒီကားဟာ မကွညျ့မဖွဈ ကွညျ့သငျ့တဲ့ကားစာရငျးမှာပါတယျလို့ပွောရငျတောငျ လှနျမယျ မထငျပါဘူး ခငျဗြာ။
Baazaar ဆိုတာ အိန္ဒိယအခေါ်အရ ဈေး ၊ ဈေးကွက်ပေါ့….ဟုတ်ပါတယ်ဈေးဆိုတဲ့အတိုင်း ရောင်းသူရှိမယ် ဝယ်သူရှိမယ်ဈေးအပြိုင်တင်တာ ချတာတွေ အပြင်ရောင်းသူ ဝယ်သူနှစ်ဦးကြားက ပင်မဦးတည်ရာ အရှုံးနဲ့အမြတ်ဆိုတာလည်း ရှိမှာပေါ့….ဒီဇာတ်ကားကြည့်ပြီးတော့ တွေးစရာတွေက ခေါင်းထဲမှာ အစပေါင်းများစွာ ထွက်လာတယ်…
ဘဝသရုပ်ဖော်လို့ပြောရမလားစီးပွားရေးလောက အကြောင်း ၊ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အကြောင်းလားဒါမှမဟုတ် ကြီးပွားချမ်းသာချင်တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းပဲလား…ကိုယ်လိုချင်သလို ယူလို့ရပေမယ့်ကျွန်တော့်အတွက်က ရသစုံ ပါဝင်နေတဲ့ ဟင်းလေးအိုးကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ….
ဟိုးငယ်စဉ်ကတည်းက ဘဝကို ချို့ချို့တဲ့တဲ့ နေလာခဲ့ရတဲ့ရှာကွန်းကိုသာရီ…..မိဘရဲ့လောင်းရိပ်အောက်ကနေ ထိုးထွက်ပြီးအလင်းရောင်ရှိမယ်ထင်တဲ့ မွန်ဘိုင်းမှာ အခြေချပြီးဘဝကို တက်လမ်းရှာချင်နေသူ လူငယ်လေး ရီဇ်ဝမ်အာမက်….မြို့ပြရဲ့လူနေမှုစရိုက်တွေကြားမှာသိက္ခာနဲ့ငွေကို အလဲအထပ်လုပ်နေမိတဲ့ မိန်းကလေး ပရီယာရိုင်း…
ဒီဇာတ်ကောင် သုံးခုက ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ပင်စည်ဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ကုမဏီအုပ်စုတွေ ၊ သူတို့မိသားစုတွေအကြောင်းနဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အကြောင်းတွေက ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အကိုင်းအခက်တွေလို့ပြောရမှာပါ….ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲ ညွှန်းပါရစေ….
၂၀၁၈ ခုနှစ်ထွက် ဘောလိဝုဒ်ကားတွေထဲမှာဒီကားဟာ မကြည့်မဖြစ် ကြည့်သင့်တဲ့ကားစာရင်းမှာပါတယ်လို့ပြောရင်တောင် လွန်မယ် မထင်ပါဘူး ခင်ဗျာ။